Dahabshiil waxay ku guuleysatey amar ka dhan Barclays
Maxkamadda Sare waxay maqashay codsi ku saabsan amar ku meel-gaar ah, si looga hortago bangiga Barclays in uu joojiyo adeegga bangiyada ee ay u sinaayay Dahabshiil, waa Xawaalada ugu wayn ee ka howlgalo Afrika.
Mamulaha Shirkadda Dashabshiil , Abdirashiid Duale ayaa gacanta galiyay Raisulwasarihii hore David Cameron ee Abaal marintii bixiyay Wargeysa Muslin 2014
Dahabshiil oo la aqoonsaday 2013 Excellence for Award Enterprise
Shirkadda Dahabashiil, waa Shikadda ugu weyn Afrika ee bixisa lacaga caalamiga ah waxaan lagu Sharfay abaalmarinta ganacsiga, lagu gudoonsiiyay 2013 Xafladii ay qabay Wargeyska Muslim News Award oo k dhacday Grosvenor House ee London Uk.
Dahabshiil Group Oo Dib Udhistay Una Dayactirtay Qeebta Baxnaanada Isbitaal Madiina
Qeybta Baxnaanada ee Isbitaalka Madiina ayaa hada si buuxda u adeegta. Shirkadda Dahabshiil ayaa dayactir iyo dib u dhis ku sameysay qeybtaan, waxaa sharafweyn inoo ah in aan caawino meelkasto oo baahi ka jirto. Agaasimaha Isbitaalaka Madiina Dr. Mohamed Yusuf, Dahabshiil ayaa gacan ka geysatay adeegaan oo Gabi ahaan ba ka maqnaa Isbitaalaka madiina, Taasi oo ah taageerida mar walbo ay siiso Hayadaha Cafimadka iyo Bulshada. guud ahan ay ku faraxsanyihiin.
eDahab Beddelka Xawilaadaha Lacagta ah ee aad ku aamini karto waad ku kalsoon tahay
Dhamaan Adeegyada isku xiran ee Somtel waa adeegyo casri ah ee ugudanbeeyay, eDahab. Electronic Dahabshiil” waa adeeg Lacag Ku shubasho iyo lacag bixin mobile, kaas oo kuu ogolaanaya inaad bixiso wax alla wixii aad ku bixin karto adigoo isticmaalaya taleefankaaga halkii aad ku bixin lahayd kaar, jeeg, ama kaararka deynta. Dooro in la iskugu kaa xiro eDahabka iyo Dahabshiil Bank Account, waad dhigan kartaa waana kala bixi kartaa adigoo cagta soo dhiga Bangiga. Adeeggani wuxuu kaa caawinayaa, inaad lacag u dirto saaxibada, qoyska meelkasta oo ay Joogaan Wadanka gudihisa iyo dibedda. Waxaa kaloo ka mid ah Adeegyada ay bixiso eDahab Kushubo Karrka ku hadlaka , taas oo laga goyn doono xisaabta kuu jirta eDahab. Xawaalada si aad ugu dirsato Somalia/Somaliland waxa aad u baahantahay Numbarka somtel iyo eDahab. Lacagta aa diraty waxay toos ugu dhicidoontaa account eDahab. Markay lacagta Xisaabtaada eDahab Kuugu soo dhacado Qofka aad Jaceshahay ayaa sidoo kale
Ku iibso alaabta Dukaanka taalo
Si deg deg ah Ku dirso Kuna hel Lacagata
Lacag diris toos Mobile-kaga eDahab meel walbo soomalia/Somaliland.
Ku saabsan Somtel
Shirkadda Isgaarsiinta ee Somtel waxaa la aas aasay May,2009 Magaalada Hargeysa. Waxayna leedahay Xadka ugu balaaran Shirkadaha isgarsiinta ee gobolka, Xarumaha iyo ateenoyinka shirkadda Somtel Gobolkasto ayaa ka helikartaa. Si dhaqso ah ayay u soo kacaysaa si ay u noqoto hogaanka shirkadaha ingaarsiinta ee Afrika, adeeyadeeda aadka u wanaagsan oo ay ka mid yihiin Tiknolojiyada Xogta taleefanka, Adeega lacag dirista Mobile (eDahab),Adeega wareego iyo kuwa kale oo badan. Himilooyinka Shirkadda Somtel waa inay bixiso adeega ugu sareeyo, aydoo kaa shaneyso khibrada macaamiisha guud ee gudaha ah, iyo inay in ay ku soo jiidato badeecadeeda macaamiisheeda ee adeega ah sidoo kalane in gacan ka geysato hormar dhaqaalaha dhamaan suuqyada ay ka howlgasho. Somtel waxay dooneysaa in ay noqoto kooxda ugu caansan ee isgaarsiinta ee suuqyada, waxayna ku dadaaleysaa inay si joogta ah u kobciso naqshadeeda marka laga reebo inay bixiso tiknoolajiyada ugu horreysa ee suuqa waxayna u caawiyaan macaamiishooda xaalada walbo ay ku suganyihiin. Tani waa caddaynaysa tijaabooyinkeeda suuq-geynta ah ee ugu horaysa ee gobolka si loo siiyo adeega Voip iyo adeegyada 4G. Khibradaha noocaas ah ee teknoolajiyada ayaa ka caawiyay Somtel qabashada saamiga suuqa sida ay u korodhay, adeegyo badan, oo ay ku jiraan wicitaanada fiidiyowga, xirmooyinka mareegta iyo adeega Vaslaha ah waxay beddeshay duruufaha suuqa oo sii waday bixinta adeegga internetka ee moobiilka ah ee macaamiisha. Waxqabadka Somtel iyo adeegyadaa waxaa si weyn loo aqoonsaday warshadaha waxaana lagu abaalmariyaa daacadnimada macaamiisheeda meel walba.